Financial१ चमत्कारी प्रार्थनाहरू वित्तीय सहयोगको लागि प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स Financial१ चमत्कार प्रार्थनाहरू आर्थिक सहयोगको लागि
हामी सेवा दिन्छौं चमत्कार काम गर्ने ईश्वर, जो एक ईश्वर हुनुहुन्छ जो हाम्रो सदा हुनुहुन्छ मदत आवश्यक समयमा। उहाँ हामीलाई भोलि फिर्ता आउन भन्नुहुन्न, जब उहाँसँग आज हामीलाई सहायता गर्न उहाँसँग सामर्थ्य छ। आज हामी आर्थिक सहयोगको लागि 31१ चमत्कार प्रार्थनामा संलग्न हुने छौं, तपाईंको आर्थिक अवस्था जतिसुकै खराब होस्, तपाईंले आज येशूको नाममा सहायता प्राप्त गर्नुहुनेछ। पैसा भनेको वस्तु र सेवाको लागि आदानप्रदानको एक साधन हो। त्यसकारण पैसा स्वर्गबाट ​​झर्दैन, पैसा इनाम हो तपाईले सेवा प्रदान गर्न वा सामानहरू प्रदान गर्नका लागि पाउनुहुन्छ। आर्थिक सहयोगको लागि यो चमत्कारी प्रार्थना पोइन्टस चमत्कारी पैसाको लागि होईन, बरु भगवानले तपाईंको लागि अवसरहरूको ढोका खोल्न। जब तपाईं यो प्रार्थना विश्वासमा संलग्न गर्नुहुन्छ, भगवान तपाईंलाई आर्थिक दिनुहुन्छ विचार र तपाइँलाई नयाँ व्यापार साझेदारहरूसँग जोड्नुहोस् जसले तपाइँको वित्तीय क्षेत्रमा मद्दत गर्दछ। यो एक प्रार्थना हो जसले तपाईंलाई वित्तीय जिम्मेवारी र शोषणको लागि सेट अप गर्दछ। तपाईं येशूको नाममा उत्कृष्ट हुनेछ।
प्रत्येक विश्वासीलाई परमेश्वरको सहयोग चाहिन्छ, कोही पनिविना जीवनमा सफल हुँदैन, र पवित्र आत्मा हाम्रो सहायक हो। आर्थिक सहयोगको लागि यो चमत्कार प्रार्थनाहरू तपाईंलाई पवित्र आत्माले निर्देशित वित्तीय सहयोगीहरूसँग ईश्वरीय रूपमा जोड्दछ। व्यक्ति जसले तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय, क्यारियर, वा तपाईंको वित्तीय आवश्यकताको कुनै क्षेत्रमा सहयोग गर्दछ। आज जोश र दृढ विश्वासका साथ यो प्रार्थना गर्न तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यस चमत्कार प्रार्थनामा संलग्न हुनुभयो भने एक चमत्कारको अपेक्षा गर्नुहोस्। तपाईं येशूको नाममा फेरि आफ्नो जीवन मा आर्थिक सहयोग कहिल्यै कमी हुनेछ।
Progress 4. मेरो प्रगतिमा भएका सबै प्रतिबन्धहरू येशूको नाममा झर्नुहोस् र तितरबितर होऊन्।
, 7. प्रभु, मलाई येशूको नाममा सबै खराब बुद्धि र हेरफेरबाट जोगाउनुहोस्
I 9. म येशूको नाममा मेरो विरुद्ध भेला भएका दुष्ट भीडलाई तितरबितर पार्छु।
। 14. म येशूको नाममा कुनै पनि खराब डायवर्जनलाई अस्वीकार गर्दछु।
I 15. म येशूको नाममा प्रभु येशूबाट मेरो आँखा हटाउने छैन।
Lord 16. हे प्रभु, येशूको नाममा मेरो टाउकोमा तपाईंको कृपा ल .्काउनुहोस्
Lord 17. हे प्रभु येशू, मलाई अब चिन्ह र अचम्मका चीजहरू दिनुहोस्।
Red 18. मेरो लाल समुद्रको स्थितिमा, येशूको नाममा भगवान परमेश्वर होऊन्।
God 19. हे परमेश्वर, यो जान्नुहोस् कि तपाईं येशूको जीवनमा मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
Lord 24. हे प्रभु, त्यस दुष्ट सेनाको प्रत्येकलाई जवाफ दिन शुरु गर्नुहोस् जुन मेरो आर्थिक प्रगतिको बिरूद्ध आगोसँग लड्छ र तिनीहरूलाई खरानीमा भुलिन्छ।
Life 25. मेरो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिलाई चुनौती दिने हरेक शक्ति, अब येशूको नाममा कलंकित होस्।
Financial 26. मेरो आर्थिक सफलताको बिरूद्ध शत्रुको प्रत्येक क्रोध अब येशूको नाममा बदनाम हुन दिनुहोस्।
Against 27. मेरो विरुद्धमा बज्ने हरेक खराब कल्पनाहरू निराश र येशूको नाममा आगोले बदनाम होस्।
Financial 28. मेरो वित्तीय भविष्यको महिमाको बिरूद्ध प्रत्येक शैतानी योजनालाई येशूको नाममा बेकारको होस्।
Rulers 29. दुष्ट शासकहरू मेरो विरुद्धमा भेला भए, येशूको नाममा तितरबितर होऊन्।
अघिल्लो लेखमाF० प्रार्थना पोइन्टहरू आध्यात्मिक फलहरूको प्रकटको लागि
अर्को लेखमासुरक्षाको लागि भजन २ 27 प्रार्थना पोइन्टहरू
मार्क अक्टुबर,, २०१ At १०::० अपराह्न
Svp, priere de me guider dans mon कारोबार
एनी क्यारिन फेब्रुअरी २,, २०२० ११:२:23 अपराह्न
कृपया सहयोग चाहिन्छ
यानिक मार्च,, २०२० साँझ :30::2021
बोनजोर 'एल'एसोसिएशन जेईए प्रस्तोटर जेईएम नाममे निआमियन यानिक जेभस एक्रेरी से मॅटिन डालो सोलसिटर वोट्रे एड फाइनन्सी कार जे ट्रान्स डेस गाह्रो - कार्यवाहक
जेडेन्का मे,, २०१ 21::2021१ अपराह्न
एथोनेट मोती जुन 22, 2021 11 मा: 09 बिहान
KE KOP THUSO E POTLAKILENG
हाइंगोभोलोलोना रजाफिन्ड्रकोको जून २,, २०१ 27 साँझ :2021: १। बजे
पीएमयू Je० मिलियन डालो pourtudier à l'université (enseignement à la télévision) र अन मैसिनको निर्माणमा @ Jeeee Dee prières pour obtenir beaucoup d'argent।
हैइंगोभोलोना जून २,, २०१ 27 साँझ :2021: १। बजे
पीएमयू Je० मिलियन डालो étudier à l'université (télé-enseignement) र अन मैसिनलाई बुझाउँदछ।
वैवाहिक ढिलाइ विरुद्ध 50 रात प्रार्थना